Ukubaluleka kokukhetha isihlalo esihle sehhovisi | Hlobisa
Ukubaluleka kokukhetha isihlalo esihle sehhovisi
UMaria Jose Roldan | 06/10/2021 11:17 | Izithako
Ubhadane lubangele, phakathi kokunye, ukuthi abantu abaningi basebenza emakhaya. Ngakho-ke kungakuhle ukuthi sibe nesikhala ngaphakathi ekhaya, sokwenza umsebenzi ngaphandle kwenkinga. Ukuba nesihlalo esihle sehhovisi kubalulekile futhi kubalulekile uma kukhulunywa ngokunethezeka ngenkathi usebenza. Akukuhle ukwehla ngentengo bese ukhetha isihlalo okuthi, yize kubiza, kuvumele umqolo ukuba uphumule futhi ungaphatheki kabi ngemuva kwamahora namahora okusebenza.
Isihlalo esihle sehhovisi ngakho-ke sibalulekile uma kukhulunywa ngokugwema izinkontileka ezingaba khona kanye nezinkinga zezinqe zombili esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Esihlokweni esilandelayo sikunikeza uchungechunge lwezeluleko noma imihlahlandlela ongayilandela ukuze wazi ukuthi ungasikhetha kanjani isihlalo esihle sehhovisi.
1 Kungani isihlalo esihle sehhovisi sibalulekile
2 Amathiphu lapho ukhetha isihlalo sehhovisi
Kungani isihlalo esihle sehhovisi sibalulekile
Isihlalo siyinto eyisisekelo kunoma yimuphi umsebenzi noma isikhala sokufunda. Isihlalo esingalungile sivame ukudala ukuthi umuntu angenzi kahle emsebenzini futhi abe nezinkinga ezehlukene zempilo. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthola usihlalo wehhovisi kahle futhi uzuze ngale ndlela, ukwazi ukusebenza ngendlela enethezekile nokunakekela impilo.
Ukuba nokuma okuhle kutholakala ngenxa yesihlalo lapho kuhlala khona umuntu. Uma kungenjalo, ungathola izinkinga ezinkulu emuva noma kwemisipha njengoba kunjalo ngentamo eqinile noma ubuhlungu be-lumbar. Ngakho-ke, akufanele inganakwa futhi inikezwe ukubaluleka kwayo edeskini noma kusihlalo wehhovisi.
Amathiphu lapho ukhetha isihlalo sehhovisi
Kunamahora amaningi angasetshenziswa phambi kwesikrini, Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukushaya umaka ngesihlalo sehhovisi. Lapha sizokhuluma ngochungechunge lwezinto okufanele ungazinaki lapho ukhetha isihlalo esihle sehhovisi:
Into yokuqala okufanele uyihlole ukuthi isihlalo sehhovisi singalungiswa ngaphandle kwenkinga.. I-headrest kufanele ikwazi ukuhamba ngokuvundlile nangokuqondile. Okufanayo kufanele kwenzeke nge-armrest futhi babe nezikhundla eziningana ezisiza ukuthola indawo ekahle yokusebenza. Ezimweni eziningi, izihlalo zasehhovisi azikwazi ukulungiswa futhi umuntu akakhululekile lapho ehleli.
Esinye isici okungafanele singanakwa lapho uthenga isihlalo sehhovisi ukuthi ikuvumela ukuthi ulungise ukuphakama kwayo futhi lungisa ukuthambekela ukuze ingemuva ingahlupheki. Ochwepheshe kule ndaba bayeluleka ukuthi indlela ekahle yokuma ukuze umqolo ungathinteki yilezo ze-90 degrees. Ezikhathini eziningi, kunconywa ukuthola indawo yokuhamba ngezinyawo, ikakhulukazi esimweni sokuthi uzochitha amahora amaningi uhleli phambi kwesikrini sekhompyutha.
Usihlalo kufanele abe nokusekelwa okuhle kwezindonga ukuze ingemuva lingaphatheki lapho uhleli. Ukuthola ukusekelwa okunjalo kuyadingeka futhi kuyisihluthulelo esimweni lapho umuntu kufanele achithe isikhathi esiningi ehleli. Uma isihlalo sinokusetshenziswa okuthile, akuyona into ebalulekile uma kuziwa ekutholeni eyodwa.
Isici sokugcina ukusihlola maqondana nosihlalo wehhovisi, kungenxa yokuthi ilungele ukuphakama komuntu. Ukuba mude kakhulu noma okufushane kukwenza kudingeke futhi kudingekile ukuthi isihlalo singalungiswa siye ekuphakameni okulungile. Ezimweni eziningi, lokhu akuyona into ebalulekile, ngoba iningi lezihlalo emakethe lijwayela ngaphandle kwenkinga ngosayizi ophakathi.
Ngamafuphi, izinkinga eziningi zangemuva ezihlupheke kubantu abaningi namuhla, Kungenxa yokuchitha amahora amaningi uhleli esihlalweni esingasifanele. Kufanele unikeze ukubaluleka kwalesi sihlalo futhi uhlale ukhetha imodeli evumelana ngaphandle kwenkinga nezidingo zomuntu.
Ekuqaleni, kungabonakala sengathi ukuma kulungile, kepha esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside kungaba nezimo ezahlukahlukene ngemuva njengezinkontileka noma ukulimala okubi kakhulu okufanele kulashwe. Eminyakeni edlule, kuvela izimo ezahlukahlukene endaweni engemuva, ebingagwemeka ukube bekukhona isihlalo esihle sehhovisi. Ngakho-ke kungcono ukutshala esihlalweni esihle futhi ungakhethi esinye esingabiza kakhulu amaphakethe, kodwa kungaba yingozi enkulu empilweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Izithako » Ukubaluleka kokukhetha isihlalo esihle sehhovisi
Ungawasusa kanjani amabala amanzi emafasiteleni nasezibukweni
Izitezi ezi-5 ezifanele zokugezela